လန်ဒန်မြို့၌ ပြုလုပ်သည့် ၁၉၀၅ ခုနှစ် မတိုင်မီ ထုတ်လုပ်သော ကားပြပွဲက ကားဝါသနာအိုးများအား ဆွဲဆောင်နိုင်ခဲ့ - Xinhua News Agency
)ဗြိတိန်နိုင်ငံ လန်ဒန်မြို့၌ နှစ်စဉ်ကျင်းပပြုလုပ်သည့် Regent Street Motor ပြပွဲအတွင်း ၁၉၀၅ ခုနှစ် မတိုင်မီ ထုတ်လုပ်သော ကားပေါ်တွင် ထိုင်နေသည့် ကားပိုင်ရှင်အား နိုဝင်ဘာ ၆ ရက်တွင်တွေ့ရစဉ်(ဆင်ဟွာ)
လန်ဒန် ၊ နိုဝင်ဘာ ၈ ရက်(ဆင်ဟွာ)
ဗြိတိန်နိုင်ငံ လန်ဒန်မြို့၌ နှစ်စဉ်ကျင်းပပြုလုပ်သည့် Regent Street Motor ပြပွဲအတွင်း ၁၉၀၅ ခုနှစ် မတိုင်မီ ထုတ်လုပ်သော ကားဘေးတွင် မတ်တပ်ရပ်နေသည့် ကားပိုင်ရှင်အား နိုဝင်ဘာ ၆ ရက်တွင် တွေ့ရစဉ်(ဆင်ဟွာ)
ဗြိတိန်နိုင်ငံ လန်ဒန်မြို့၌ နှစ်စဉ်ကျင်းပပြုလုပ်သည့် Regent Street Motor ပြပွဲသို့ လာရောက်ကြည့်ရှုသူများအား နိုဝင်ဘာ ၆ ရက်တွင် တွေ့ရစဉ်(ဆင်ဟွာ)
ဗြိတိန်နိုင်ငံ လန်ဒန်မြို့၌ နှစ်စဉ်ကျင်းပပြုလုပ်သည့် Regent Street Motor ပြပွဲအတွင်း ၁၉၀၅ ခုနှစ် မတိုင်မီ ထုတ်လုပ်သော ကားပေါ်တွင် ထိုင်နေသည့် ကားပိုင်ရှင်အား နိုဝင်ဘာ ၆ ရက်တွင် တွေ့ရစဉ်(ဆင်ဟွာ)
လန်ဒန်မြို့၌ နှစ်စဉ်ကျင်းပပြုလုပ်သည့် Regent Street Motor ပြပွဲ၌ ၁၉၀၅ ခုနှစ် မတိုင်မီ ထုတ်လုပ်သော ကားအစီးရေ ၁၀၀ ကျော်အား ခင်းကျင်းပြသထားရာ ယာဉ်အသွားအလာကင်းရှင်းသည့် Regent Street လမ်းပေါ်၌ မော်တော်ကားဝါသနာအိုး ထောင်ပေါင်းများစွာကို ဆွဲဆောင်ထားနိုင်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ (Xinhua)
Veteran car show attracts enthusiasts in London
LONDON, Nov.7(Xinhua) — Over one hundred veteran cars were on display at the annual Regent Street Motor Show in London on Saturday, attracting thousands of car enthusiasts on the traffic-free Regent Street.
Photo 1 – The owner sits in her veteran car during the annual Regent Street Motor Show in London, Britain, Nov. 6, 2021. (Xinhua/Li Ying)
Photo2– The owner stands next to his veteran car during the annual Regent Street Motor Show in London, Britain, Nov. 6, 2021. (Xinhua/Li Ying)
Photo3– People tour the annual Regent Street Motor Show in London, Britain, Nov. 6, 2021. (Xinhua/Li Ying)
Photo4– The owner sits in her veteran car during the annual Regent Street Motor Show in London, Britain, Nov. 6, 2021. (Xinhua/Li Ying)■
ထိုင်းနိုင်ငံက ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးစာရင်းဝင် ဟိုက်ဒရို-ရေပေါ်ဆိုလာပြား စွမ်းအင်စီမံကိန်းနှင့်အတူ ကာဗွန်လျော့နည်း လူ့အဖွဲ့အစည်းတည်ဆောက်